Pakbug database leaked by God..
Myanmar IT Resource Forum » NEWS ZONE » » Hacking & Security ႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ား » Pakbug database leaked by God..
1 Pakbug database leaked by God.. on 20th August 2011, 12:24 am
Hi Pakistani Hackers...
oopssss not hackers small kids...
or havij army!!!!
This is last warning to all of you...
Stop hacking Indian websites..
Hacking small websites of India and calling urself hackers!!
shame on u people...
Stop hacking innocent websites.
u cannot even secure ur own ass, and talking about hacking others..
Shutdown ur machines and go to some school learn JACK AND JILL.
This hacking world is not for you..
Dont force me to do it again...
Remember GOD was here last warning to all pakistani hackers.
This time it was pakbugs, next... Dont ever force me to do that..
Special Thanks to Indian Cyber Army (Indishell)
love to all Indians hackers
And big fuck to all pakistani hackers..
i think he use xploit of vbulletin 4.1.3 of admin didn't fixed but it is only leaked. need to crack p/w salted hash.
Anonymous က Facebook ကိုတိုက်ခိုက်ချမူန်းမည်ဟုဆို
ဟက်ကာများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ဖွဲ့စည်းထားသည့် Anonymous က facebook ကိုလူမူရေးကွန်ရက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်နေ့၌ တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးပစ်မည်ဟု သိရှိရသည်။
twitter account နှင့်You Tube တို့ကိုအသုံးပြူပြီး အဆိုပါတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးမည့် facebook စစ်ဆင်ရေးဟု ကင်ပွန်းတတ်ထားသည့်စီမံကိန်းကို တစ်စုံတစ်ယောက်က ထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပဒေရေးရာများဆောင်ရွက်သည့်အဖွဲ့အစည်းများကို ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်သည့် Lulz Sec ဟက်ကာအုပ်စုနှင့်ဆက်သွယ်ပူးပေါင်းသည့် Anonymous ခြေလှမ်းသစ်ဖြစ်ဖွယ်ရာရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ user သတင်းအချက်အလက်များကို ရယူပြီး အစိုးရအေဂျင်စီများနှင့် သတင်အချက်အလက်လုံခြုံရေး company များထံရောင်းစားနေသည့် facebook ကို user များကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များလုံခြုံရေးအတွက် အဆုံးသတ်ပစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဟက်ကာများကပြောကြားခဲ့သည်။
user က facebook account ကိုဖျက်ပစ်သော်လည်း facebook ၌ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များ ကျန်ရစ်နေသဖြင့် facebook သည်User ရဲ့ မိသားစုဝင်များထက် user အကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့သည် တောင်းပန်ခြင်း၊ မေ့လျော့ခြင်းမရှိသည့် လီဂျင်း တိုက်ခိုက်ရေးသမားများဖြစ်ကြောင်း anonymous ထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့သည်။